Abavelisi boomatshini boMenzi wetyala kunye nabaBoneleli-i-China Case Menzi Factory yomatshini
SLG-850-850L umsiki wekona & umatshini wokuhlamba
Umzekelo we-SLG-850 SLG-850L
Material ubungakanani ubukhulu: 550x800mm(L*W) 650X1050mm
Ubungakanani bezinto eziphathekayo: 130x130mm 130X130mm
Grooving Normal Ukuchaneka: ±0.1mm
IGrooving Eyona Ukuchaneka: ±0.05mm
Ikona Ukusika ubude bemizuzu: 13mm
Isantya: 100-110pcs / min kunye ne-1 feeder
Umatshini wokugrumba weDijithali ozenzekelayo
Ubungakanani bezinto eziphathekayo: 120X120-550X850mm(L*W)
Eyona Echanekileyo: ± 0.05mm
Ukuchaneka okuQhelekileyo: ± 0.01mm
Isantya esiphezulu: 100-120pcs / min
Isantya esiqhelekileyo: 70-100pcs / min
AM600 Umatshini wokuncamathela weMazibuthe ozenzekelayo
Umatshini ulungele ukuveliswa okuzenzekelayo kweebhokisi zesitayile zencwadi ezinokuvalwa kwamagnetic.Umatshini unokutya okuzenzekelayo, ukubhola, ukuncamathelisa, ukuchola kunye nokubeka iimagnethi / iidiski zentsimbi.Ithathe indawo yemisebenzi yezandla, ebonisa ukusebenza kakuhle okuphezulu, okuzinzileyo, igumbi elidityanisiweyo elifunekayo kwaye lamkelwa ngokubanzi ngabathengi.
Sisixhobo esikhethekileyo seencwadi ezinoqweqwe olulukhuni.Ibonakala ngolwakhiwo olulungileyo, ukusebenza lula, ukusika ngokucocekileyo, ukuchaneka okuphezulu kunye nokusebenza kakuhle njl njl. Igalelwa ukusika umqolo weencwadi ezinoqweqwe olulukhuni.
Yenza imeko yekona eqhelekileyo ibe ngumjikelo omnye, ayifuni inkqubo yotshintsho, uya kufumana ikona ejikelezileyo.Kwikona yeradiyasi eyahlukeneyo, tshintshisa nje ukubumba okwahlukileyo, kuya kulungelelaniswa ngokulula phakathi komzuzu omnye.
ASZ540A 4-Umatshini wokuSonga icala
Umgaqo we-4-Side Folding Machine wondla umphezulu wephepha kunye nebhodi ebekwe ngokucofa kwangaphambili, ukuSonga amacala asekhohlo nasekunene, Ikona yokucofa, ukuSonga ngaphambili nangasemva, Ukucofa inkqubo elinganayo, ethi yonke iqonde ngokuzenzekelayo amacala amane.
Lo matshini udityaniswe neempawu ezichaneke kakhulu, isantya esikhawulezayo, ukugotywa kwekona ye-prefect kunye nokusonga icala eliqinileyo.Kwaye imveliso isetyenziswa ngokubanzi ekwenzeni i-Hardcover, i-Notebook, ifolda yoxwebhu, iKhalenda, ikhalenda yodonga, i-Casing, ibhokisi yesipho njalo njalo.
I-SEMI-AUTO HARDCOVER INCWADI YOLUHLU LOMSHINTI
Umatshini we-ST060H we-High-Speed ​​Hardcover
Umatshini wokwenza izinto ezininzi ezisebenzayo awuvelisi kuphela ikhava yegolide kunye nesilivere, ikhava yephepha elikhethekileyo, isigqubuthelo sezinto ze-PU, isigqubuthelo selaphu, isigqubuthelo sezinto zePP seqokobhe lesikhumba, kodwa ikwavelisa ngaphezulu kwesinye isigqubuthelo seqokobhe lesikhumba.
R18 Smart Case Menzi
I-R18 isetyenziswa ikakhulu kwimizi-mveliso yokupakishwa kunye neencwadi kunye namaxesha athile.Imveliso yayo isetyenziswa kakhulu ukupakisha iiselfowuni, i-electronics,izixhobo zombane, izithambiso, ukutya, impahla, izihlangu, imidiza, utywala kunye neemveliso zewayini.
FD-AFM450A umenzi wetyala
umenzi wetyala oluzenzekelayo wamkela inkqubo yokondla iphepha oluzenzekelayo kunye nesixhobo sokumisa ikhadibhodi;kukho iimpawu zokubeka ngokuchanekileyo kunye nokukhawuleza, kunye neemveliso ezintle ezigqityiweyo njl. Isetyenziselwa ukwenza iikhava zeencwadi ezigqibeleleyo, iincwadana zamanqaku, iikhalenda, iikhalenda ezijingayo, iifayile kunye namatyala angaqhelekanga njl.
CM540A umenzi wetyala oluzenzekelayo
I-FD-AFM540S i-Automatic Lining Machine
Umatshini ozenzekelayo we-lining uyimodeli elungisiweyo evela kumenzi wecala oluzenzekelayo olungiselelwe ngokukodwa ukufakwa kwephepha langaphakathi lamatyala.Ngumatshini wobuchwephesha onokusetyenziswa ukwenza umgca wephepha langaphakathi kuqweqwe lwencwadi, ikhalenda, ifayile ye-lever arch, iibhodi zemidlalo, kunye neepakethi zeepakethi.